Ngwaọrụ 5 ga - eme ka nsonaazụ gị site na ịde blọgụ | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 11, 2014 Tọzdee, Machị 4, 2021 Ian Cleary kwuru
Otu blọọgụ nwere ike ịbụ ezigbo isi iyi nke okporo ụzọ na weebụsaịtị gị, mana ọ na-ewe oge iji mepụta posts blog ma anyị anaghị enweta nsonaazụ anyị chọrọ. Mgbe ị na-eme blog, ịchọrọ ijide n'aka na ị ga-enweta uru kachasị na ya.
N'isiokwu a, anyị akọwapụtala ngwa ọrụ 5 ga - enyere aka melite nsonaazụ gị site na ịde blọgụ, na - eduga n'ọtụtụ okporo ụzọ yana, n'ikpeazụ, ahịa.
1. Jiri Canva mepụta onyonyo gị
Ihe oyiyi na-adọrọ uche gị ma ọ bụrụ na ịnweghị uche nke ndị ọbịa na blọgụ gị, ha agaghị agụ ya. Mana imepụta ihe na-adọrọ adọrọ, nke a na-ele anya na ọkachamara na-ewe oge ma, ọ bụrụ na ị nweta enyemaka ọkachamara, ọ dị oke ọnụ!
Canva bụ ihe ngosi ihe osise nke ahụ na-enyere ndị na-enweghị uche na ndị na-enweghị ọgụgụ isi ike ịmepụta ihe onyonyo na-enweghị mkpa nka eserese eserese.
Ozugbo ịhọrọ ụdị onyonyo ịchọrọ imepụta (Facebook post, Pinterest pin, blog graphic) ị nwere ike ịhọrọ site na ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ nke ọkachamara ọkachamara na naanị ole na ole tweaks nwere ike ịhazi ya iji kwekọọ n'ụdị na mkpa gị.
Naanị ịdọrọ na dobe onyonyo nke gị buliri na imewe (ma ọ bụ họrọ site n'ọbá akwụkwọ sara mbara nke ihe oyiyi ngwaahịa), tinye ihe nzacha anya, kpuchie ya na ederede na ihe osise ndị ọzọ, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Họrọ imewe wee hazie onyonyo, agba, na ederede
Maka blọọgụ ọ bụla gbaa mbọ hụ na ị nwere opekata mpe ihe osise na-adọta onye na-agụ gị. Canva nke dị mfe nghọta nke onye ọrụ na-adị mfe nnabata na-enyere gị aka ịmepụta onyonyo na-adọrọ adọrọ maka blọgụ gị n'ime nkeji. Mgbe gị na Canva nọrọ oge, ị ga-eche etu ị siri dịrị ndụ na enweghị ya.
2. Nyochaa ndị asọmpi gị n'iji ya Semrush
Inweta echiche maka posts siri ike zuru ezu mana ịmara nke ga-ewetara gị okporo ụzọ nwere ike isi ike. Knowingmara ihe na-arụ ọrụ maka ndị asọmpi gị nwere ike ịnye echiche na echiche bara uru maka blọgụ nke gị.
iji Semrush ị nwere ike tinye adreesị weebụsaịtị gị na-elele ndepụta nke isiokwu kachasị elu ha na-akwado ugbu a na Google. Nwere ike ịhụ isiokwu ahụ, nyocha atụmatụ maka isiokwu ndị ahụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na onye na-asọmpi gị na-enweta okporo ụzọ maka isiokwu ndị a ma eleghị anya enwere ohere ide ederede ịchọrọ isiokwu ndị ahụ ka ị wee were ụfọdụ n'ime ndị na-asọmpi gị ahịa!
Ma cheta, nke a abụghị maka ị copomi onye asọmpi gị. Nwere ike ịmepụta edemede gị gburugburu Keywords mana ọdịnaya ga-adị iche. Chọrọ ide edemede ka mma karịa ndị asọmpi gị ma kwalite ya. Na nnyocha ụfọdụ na Semrush ị ga-amụtakwu ọtụtụ ihe gbasara ndị asọmpi gị na nke a ga - enyere gị aka ị nweta nsonaazụ ndị ọzọ na ịde blọgụ gị.
3. Mee ka ntụgharị ntụgharị dịkwuo maka ndebanye aha Email site na iji ụzọ ịpụ apụ
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwulite ndị na - ege gị ntị na - aga n'ihu na blọọgụ gị ndepụta email dị ezigbo mkpa. Mana ọ na-esiwanye ike ịdọta uche nke ndị ọbịa na webụsaịtị gị ma mee ka ha kwenye ịbanye ma ọ bụ denye aha na email gị gbanwee ha.
Greatzọ dị mma iji dọta uche ha bụ igbe popup na-ajụ maka adreesị ozi-e ha. Ma popup igbe nwere ike ịbụ intrusive na-akpata ihe iwe mgbe ị na-eme nchọgharị na ebe nrụọrụ weebụ.
Nezọ dị mma ma dị irè na nke a bụ iji ebumnuche ọpụpụ ebumnuche, nke na-achọpụta mgbe ị na-ahapụ saịtị ahụ ma gosipụta mmapụta ahụ. Nwere ike na-eme nchọgharị na saịtị ahụ ruo ọtụtụ awa ma ọ dịghị ihe mere ma ozugbo ị gbalịrị ịhapụ weebụsaịtị ahụ popup ga-apụta.
OptinMonster bụ ihe bara uru WordPress nke na-akwado popup na ebumnuche ọpụpụ. Otu ọzọ na OptinMonster bụ Ọ dị mma nke abụghị naanị na WordPress mana enwere ike iji ya na nyiwe ndị ọzọ.
4. Mejuputa Ezi ringkekọrịta Nhọrọ
Mgbe ndị ọbịa chọtara ọdịnaya na saịtị gị nke ga-abara ndị na-ege ha ntị uru ịchọrọ ime ka ọ dịrị ha mfe ịkekọrịta ya. Nke a pụtara ịnwe akara ngosi a na-ahụkarị na weebụsaịtị gị, yabụ ozugbo ọnọdụ ga-ewe ha, ọ bụ naanị pịa pịa.
Ọkụ-enye gị ohere na-agụnye vetikal na kehoraizin nkekọrịta Ogwe na gị posts. Mgbe ị na-agbadata site na post ahụ akara ngosi ịkekọrịta ga-apụta ìhè n'oge niile. Na nso nso a, ha tinyere nke ka mma nchịkọta n'elu ikpo okwu ya mere ugbu a ị ga - ahụ ọkwa ndị na - enweta oke mbunye ma e jiri ya tụnyere nleta. ndị bụ isi ihe na - eme ka ịkekọrịta post gị, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ha nwekwara ezigbo njirimara enyi na enyi nke ndị ọrụ mkpanaka gị.
Shakekọrịta na ngwaọrụ mkpanaka na-aghọwanye ihe dị mkpa mana ịkwesịrị ijide n'aka na ọ dị mfe ịkekọrịta.
5. Ekekọrịta ọdịnaya gị ochie site na nchekwa
Ọtụtụ mgbe, anyị na-elekwasị anya n'ịkwalite ọdịnaya ọhụrụ anyị ma chefuo ọtụtụ ọdịnaya anyị nwere na weebụsaịtị anyị ka bara uru ma baa uru. Y’oburu n’inwe ihe odide mgbe obula (ihe n’adighi nma) oge a mere gini ka ikwesighi ikesa ya kwa oge.
Ndị a bụ ụdị posts zuru oke iji kwadebe na ịhazi oge na echekwa bụ oké ngwá ọrụ jikwaa a. Nke mbu, ị kọwapụtara oge ịchọrọ biputere mmelite na ntanetị gị (Facebook, Twitter) wee tinyezie posts na kwụ n'ahịrị gị dị njikere ịkekọrịta na oge ọzọ dịnụ. Ihe mgbakwunye dị na Buffer bụ Nnukwu nke na - enyere gị aka ịkwadebe ozi gị niile na mpempe akwụkwọ wee webata ha na Buffer ka ha wee tinye ya na akpaghị aka.
Họrọ ọdịnaya dị na saịtị gị nke ka bara uru ma mepụta mpempe akwụkwọ na mmelite ịchọrọ ịkekọrịta, ma bubata nke a na Buffer maka mfe na akpaka ịkekọrịta.
Blog gị bụ akụ dị mkpa maka azụmahịa gị yana site na itinye oge ụfọdụ ị nwere ike meziwanye nsonaazụ nke blọọgụ gị. N’isiokwu a anyị kọwara ụzọ ise ị ga - esi mee nke a. Kedu nke ị ga-etinye n'ọrụ? You nwere ihe ọ bụla ịchọrọ ịgbakwunye?
Ọ ga-amasị anyị ịnụ gị.
Ian Cleary kwuru
Ian bụ CEO maka Aguba ma rara ndụ ya nye iji nyere gị aka ịchọpụta ngwaọrụ na teknụzụ kachasị mma maka mgbasa ozi mmekọrịta. Ian na-ekwu okwu mgbe niile na ihe omume (ọkachasị na US), ma na-ede maka ọtụtụ blọọgụ mgbasa ozi kachasị elu.
Nov 13, 2014 na 2:17 AM
Ndiigbo… ịde blọgụ bụ ngwá ọrụ pụrụ iche iji nweta nsonaazụ na-aga nke ọma. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ nnukwu ihe iji dee blog dị egwu .Ma ọ bụrụ na ọ ghara ịdọrọ uche, mgbe ahụ mgbalị gị niile na-aga n'efu. Ọ ga-adị mma itinye obere mbọ na oge na ịde blọgụ iji mee ka ọtụtụ mmadụ gbakọta na ihe ederede gị.
Ngwaọrụ ndị a, ọ bụrụ na ejiri ya mara ihe ga - amị mkpụrụ .Ọ kachasị maka ndị mbido na ndị na - enweghị uche, ngwaọrụ ndị a na - arụ ọrụ dị ka akụ na ụba.
Yabụ, daalụ nke ukwuu maka ime ka anyị mata ngwa ọrụ ndị a iji rụọ ọrụ nwere ọgụgụ isi n'ilebara ndị ọbịa anya.
Nov 13, 2014 na 2:26 AM
Jeanne Sachs (@Chukwuta)
Nov 17, 2014 na 7:07 PM
Akwa isiokwu Ian. Achọrọ m ịgbakwunye na nghọta ndị na-ege gị ntị na ide ọdịnaya nke kwekọrọ na mkpa nke ndị na-ege gị ntị dị oke mkpa maka ịga nke ọma!